Ọgba agba ezinụlọ: "Kachasị mma prehistoric saga mgbe gwara" | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Ezinụlọ nke Cave Bear bụ akwụkwọ mbụ nke onye America a ma ama na-ede akwụkwọ Jean Marie Auel. E bipụtara ya na 1980, ọ bụ akwụkwọ akụkọ mgbe ochie, nke edebere na Paleolithic nke Europe. Site na ọrụ mbụ a, saga malitere: Mụ ụwa, nke rere ọtụtụ nde n'ime ụwa.
Akụkọ a na-egosi nwata na oge uto nke onye protagonist nke usoro, Ayla, onye site na nwata diri nwa mgbei, n'ihi na na ebo ya dabara Ọdachi nkịtị. N’etiti ahịrị ndị ahụ, a kọwara etu nwatakịrị nwanyị ahụ siri too n’obodo ọjọọ, ọ dị ezigbo iche na gburugburu ebe ọ nọbu. N’afọ 1986, Michael Chapman na-eme ihe nkiri ahụ n’ime Daryl Hannah.
1 Nchịkọta nke Cave Bear Clan (1980)
2 Nnyocha nke ezinụlọ Cave Bear (1980)
2.2.4 Ihe odide ndị ọzọ
2.3 Ezi nnọchianya
3 Echiche nke nchụàjà
4 Biography nke na-ede akwụkwọ
4.1 Egwuregwu edemede
4.2 Jean Marie Auel akwụkwọ
Na nchikota nke Ezinụlọ nke Cave Bear (1980)
ayla ọ bụ nwa nwanyị 5 afọ sitere na Cro-Magnon, onye na-agagharị na ala na-enweghị enyemaka n'ihi oke ala ọma jijiji. Njegharị ya na-achọ ebe o biri - nke na-apụ na ya na ebo ya - na-eduga ya na mpaghara a na-amaghị ama dị egwu. Na mberede, bụ a na-ama jijiji site a enorme ọgba ọdụm nke ahụ na-ahapụ ya ịnwụ site na nnukwu mmerụ ahụ.
N'aka nke ọzọ, maa jijiji mekwara mbibi a ìgwè ọzọ nke ụmụ nwoke oge ochie, neanderthals, onye bụ Ọgba agba agba. Ha kwesịrị ịhapụ ọgba ha, na-ekwu na ọbụbụ ọnụ nke ndị mmụọ ọjọọ ejirila ha. Ka ha na-agba oso ha hụrụ nwa agbọghọ ahụ merụrụ ahụ, na ozugbo, Iza - onye na - agwọ ọrịa - gbalịrị ịzọpụta ya.
- Nkume, mog-ur (shaman) nke agburu, hụrụ na nwatakịrị nwanyị akara akpụkpọ gị na ya totem emblem, nke diri ha bu akara ike. Onye obula choputara ka Ayla si di iche; ha siri ike ma sie ike, ebe ọ bụ onye tara ahụ mara mma. Nke a na - ebute echiche dị iche iche na agbụrụ, ndị na - arụ ụka ma ha ga-esoro ya gaa, ma ọ bụ hapụ ya akara aka.
N'agbanyeghị esemokwu ahụ, Iza kwenyere Brun, onye isi otu ahụ, ka ọ kpọọrọ nwa agbọghọ ahụ, na-ezo aka - na akụkụ - na ọ ga-anọ n'okpuru ọrụ ya.. Site n'ebe ahụ, Ayla ga-etolite na gburugburu ebe dị iche na nke ya, ebe agbụrụ ya bụ otu njikọ dị elu na mmalite. Nwatakịrị nwanyị ahụ nwere ọgụgụ isi na nka na ngwa agha, na mgbakwunye na ịkparịta ụka site na ịwepụta ụda, ihe na-adịghị mma n'etiti Neanderthals.
N'agbanyeghị na ndị ezinụlọ na-ajụ ya, Ayla ga-ebi na nyocha na-aga n'ihu maka nnabata. Iji nyere gị mwekota, Iza na-akuziri ya ihe omuma ya dika onye ogwu, nke ọ na - ada ngwa ngwa, mana nke ọ na - enweghị ike ịme n'ihi na ọ nweghị: "ebe nchekwa nke ezinụlọ".
Nwa agbọghọ a ga-agabiga ọtụtụ mgbanwe, mana ọ ga-enwe ike imeri ha ekele ya ike spirit, dị ka ọ na-echebe site ọgba ọdụm totem.
Ezigbo agba ...
Nyocha nke Ezinụlọ nke Cave Bear (1980)
Ọ bụ akwụkwọ ọgụgụ nke sitere na genus akụkọ ifo, nke na-ewere ọnọdụ na Crimea Peninsula, nke dị na kọntinent Europe. Akwụkwọ atụmatụ 560 peeji, kewara n'ime 28 isiakwụkwọ dị mkpụmkpụ, nke onye na-akọ akụkọ nke atọ maara ihe niile. N'ime atụmatụ ahụ dum, na-akọwa mmekorita dị n'etiti agbụrụ abụọ dịbu adị "Neanderthals na Cro-Magnons."
Ọ bụ nwa agbọghọ sitere na Cro-Magnon na sonso 5 afọonye ọ bụ naanị ya lanarịrị agbụrụ ya. Ọ bụ ya isi agwa, nke akwukwo a na nke saga niile. Onye ode akwukwo kowara ya dika nwa agbogho nwere anya ncha; àgwà nkịtị na agbụrụ ha.
Ọ bụ onye Ọrịa na-agwọ ọrịa nke ọgba bear, na onye na-elekọta Ayla ebe ọ bụ na ha hụrụ ya merụrụ ahụ. Nke nta nke nta, ọ ga-ewere obere Cro-Magnon dị ka otu nwa nwanyị, ya mere ọ ga-anwa inyere ya aka ka ndị otu agbụrụ ya nabata ya.
Ọ bụ shaman - ma ọ bụ mog-ur - nke ndị nnweta Neanderthal, onye bukwa Nwanne nwoke Iza. Ọ dara ngwọrọ. Ha na nwanne ya nwanyị ga-elekọta Ayla, ya mere, o nyere aka n'ịzụlite nwa agbọghọ ahụ.
N'ime akuko a, edere ihe odide di iche-iche di iche-iche kwụpụta: Brun (onyeisi ezinụlọ) na Broud (Nwa Brun). Aha ndị ọzọ pụtara, dị ka mkpụrụ vaịn, WHO ada Iza ga-etolite dika nwanne nwanne Ayla. Akụkọ ahụ ga-ekpughe aha ndị ọzọ dị ka: Aba na Durc, ndị dị oke mkpa na ndụ onye protagonist.
N'agbanyeghị na ọ bụ akụkọ ifo, ndị na-agụ akwụkwọ na-abanye n'ime nkọwa ndị a pụrụ ịdabere na ha na akụkụ ndị a nke genus Homo, nke diri ndị ọkà mmụta ihe ochie dere kemgbe ọtụtụ afọ. N'ihi ya, ederede na-ewetara ọtụtụ akụkọ ihe mere eme na ihe omuma nke agbụrụ abụọ a, n'etiti ha: usoro ịchụ nta ha, omenala ha, yana nkọwa zuru oke gbasara omume anụ ahụ ha.
Echiche nke nchụàjà
Ezinụlọ nke Cave Bear nwere ọtụtụ nde ndị na-agụ akwụkwọ gburugburu ụwa, naanị n'ime web pasent nnabata ya karịa 90%. Ọtụtụ na-ele ya anya dị ka: "Ihe kacha mma prehistoric saga mgbe gwara". Maka akụkụ ya, n'elu ikpo okwu Amazon ederede a nwere ọkwa 4,5 / 5; ebe ihe karịrị 70% nyere kpakpando 5 na akwụkwọ ahụ, naanị 6% jiri ya kpọrọ ihe na 3 ma ọ bụ obere.
Biography nke na-ede akwụkwọ
A mụrụ Jean Marie Untinen na Chicago (Illinois), na February 18, 1936. Ọ bụ nwa nwanyị nke abụọ nke di na nwunye America nwere agbụrụ Finland; nne ya: Martha Wirtanen; na nna ya: Neil Solomon Untinen, onye na-ese ụlọ. Na 1954, ọ lụrụ Ray Bernard Auel na afọ asaa ka nke ahụ gasịrị, ha nweeworị otu nnukwu ezinụlọ nwere mmadụ asaa, di na nwunye ahụ na ndị nke ha Sonsmụ nwoke ise.
N'ihi oke IQ ya, ọ sonyeere Mensa, nzukọ mba ụwa nke ndị nwere onyinye. Mgbe m gụsịrị ụlọ akwụkwọ sekọndrị n'abalị, gụrụ akwụkwọ na Mahadum Portland State na Mahadum Portland. Ọ natara akara ugo mmụta abụọ site na Mt. Vernon College na Mahadum Maine. Mgbe ọ dị afọ 40, ọ nwetara MBA na Mahadum Portland.
Ná ngwụsị nke mahadum, Jean Marie kpebiri itinye aka na akwụkwọ, Maka nke a, usoro nyocha banyere Ice Age malitere. Mgbe ogologo oge nke akwụkwọ ndekọ banyere usoro ọmụmụ na ọtụtụ usoro nlanarị, o kpebiri imepụta saga, kama ịbụ otu akwụkwọ. Mbido mbụ bụ: Ezinụlọ nke Cave Bear (1980), nke mechara bụrụ ihe ịga nke ọma.
Site mgbe ahụ gawa, edemede America bipụtara usoro 5 iji mezue usoro ahụ, nke ọ kpọrọ aha: Mụ ụwa. E debere akwụkwọ akụkọ ndị a na Europe tupu oge ochie, nke na-akọwa mgbanwe nke agbụrụ abụọ nke ụmụ nwoke: Neanderthals na Cro-Magnons, yana mmekọrịta ha nwere ike ime. E mere atụmatụ na e reela ihe karịrị nde iri anọ na ise gburugburu ụwa
Jean Marie Auel akwụkwọ
Saga Mụ ụwa
Ezinụlọ nke Cave Bear (1980)
Ndagwurugwu nke inyinya (1982)
Ndị Na-achụ Mmụ Anụ (1985)
Mbara ala nke n'ụzọ (1990)
Nkume ndo (2002)
Ala nke penti pinted (2011)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » Ezinụlọ nke Cave Bear
Ihe a niile ka m ga-enye gị